Soomaalida Kenya oo soo dhaweysay kalsoonida ay dowlada Kenya ... | Universal Somali TV
Shacabka ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya ayaa soo dhaweeyay go'aanka xisbiga Jubulee uu taageerada ugu muujiyay xildhibaanka bartamaha magaalada Garissa Aden Barre Ducaale.
Kadib shir talaadada maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada xisbul xaakimka oo ka dhacay magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in lama taabtaan ay tahay booska madaxa golaha aqlabiyada Baarlamaanka Kenya.
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa baraha bulshada Kenya la isla dhaxmarayay warar ku tiri ku teen ah oo ah in xilka laga qaadayo hogaanka sadaxaad ee Dalkaasi.
Qilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto mudooyinkii la soo dhaafay ayaa dhaliyay in boosaskooda ay waayaan xubno ka tirsan golaha aqalka sare oo saaxiibo dhow la ah madaxweyne ku xigeenka Kenya.
Waxaana ka mid ah madaxii hore ee golaha aqlabiyada aqalka sare Kipchumpo Morkomen gudoomiye ku xigeenkii golaha aqalka sare Kithuri Kindiki iyo haweeneyda u matasha golaha aqalka sare ismaamulka Nakuru Susan Kihika.
Kan-xigaSacuudiga oo Qorsheynaya in Xujeyda ...
Kan-horeDalka Spain oo maanta laga diiwan gal...
54,017,651 unique visits